Iskuulada Sierra Leone oo dib loo furayo - BBC Somali
Iskuulada Sierra Leone oo dib loo furayo
Image caption Dalalka uu saameeyay Ebola waxay weli la dagaalamayaan cudurka
Iskuulada ayaa maanta lagu wadaa in dib loo furo guud ahaan dalka Sierra Leone, kaddib markii ay xirnaayeen tani iyo bishii Juley ee sanadkii hore, taas oo sabab ay u ahayd cudurka dilaaga ah ee Ebola.
Sierra Leone waxa ay la mid tahay dalalka Liberia iyo Guinea – oo ka mid ah dalalka kale ee sida xun uu u saameeyay Ebola, oo iyagana hadda dib u furaya xarumaha waxbarashada.
Sida ay sheegtay hay’adda caafimaadka adduunka ee WHO, cudurka Ebola waxaa u dhimatay ku dhowaad 10,600 oo qof.
Dhowrkii maalin ee ugu dambeeyay WHO waxa ay ku adkeysaneysay in Ebola ha galbeedka Afrika weli uu yahay xaalad degdeg ah oo caafimaad oo caalami ah.
Balse weli waxaa laga soo warramayaa isbuuc kastaa in kiisas cusub ay jiraan, tirade isbuucyadii ugu dambeeyay la xaqiijiyay ayaa tusineysa in 30 kiis laga helay dalalka Guinea iyo Sierra Leone.
Hay’adda UNICEF waxa ay sheegeysaa in halista weli socoto uu micneheedu yahay in feejignaan weli la muujiyo, haddii furidda iskuulada ee Sierra Leone ay noqoto mid guuleysatay.
Waxaa lala socondoonaa xaaladda, iyadoo diiradda la saarayo wixii cusub ee soo kordha, waxaana la qaadayaa tallaabooyiin taxadar leh si loo xaqiijiyo in iskuulada ay noqdaan meelo caafimaad ahaan wanaagsan.
Qaar ka mid ah iskuulada waxaa laga dhigay xaruma caafimaad oo lagu hayay dadka uu ku dhacay Ebola, waana in la buufiyo.
Dhibaatada waxay markastaa u baahan tahay in laga taxadaro, waana in laga hadlaa qorshaha loo sameynayo xilliyadii iskuulada ay xirnaayeen.